မေး​ခွန်း​နှင့် ​အ​ဖြေ​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မေး - ​အ​ကို ​ညီ​နေ​မင်း animation ​လုပ်​နည်း ​ရေး​ပြီး​တင်​ပေး​မယ်​ဆို ​တင်​ပေး​ပါ့​လား​ဗျာ
​ဖြေ - ​ညီ​လေး​ရေ animation ​က ​ဘယ်​လို​လုပ်​ချင်​တာ​လဲ flash animation ​လုပ်​ချင်​တာ​လား ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ်​ရင် ​ရိုး​ရိုး photoshop ​နဲ့ animation ​လုပ်​ချင်​တာ​လား. Photoshop ​နဲ့ animation ​လုပ်​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ http://www.mmphotoshop.net ​မှာ ​အ​သေး​စိတ်​ရေး​ပေး​ထား ​ပါ​တယ် . ​အ​တော်​လေး​ကို ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် . ​အ​သေ​အ​ချာ ​လေ့​လာ​ကြည့်​လိုက်​ပါ ​ဓါတ်​ပုံ​တွေ​ပါ ​ပါ​တဲ့​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် . ​စာ​အုပ်​ကို​လဲ ​မှာ ​တင်​ထား​ပေး​ပါ​တယ် . ​စာ​အုပ်​ထဲ​မှာ​တော့ tools ​တွေ​အ​ကြောင်း ​ရှင်း​ပြ​ထား​တာ​နဲ့​တင် ​ပြည့်​နေ​တာ . ​အ​သုံး​ပြု​ပုံ ​န​မူ​နာ​ကို​တော့ ​သိပ်​မ​တွေ့​ရ​ဘူး . ​အစ်​ကို​ပြော​တဲ့ ​ဝဘ်​ဆိုက်​မှာ ​အ​ရင်​လေ့​လာ​ပါ . ​ထပ်​ပြီး​လို​လာ​ရင် ​အစ်​ကို ​နောက်​ထပ် photoshop ​ဝဘ်​ဆိုက်​အ​သစ်​တွေ ​ပေး​ပါ​ဦး​မယ် . flash ​က​တော့ ​တင်​ရ​မည့် program ​က ​ကြီး​တာ​ရော. ​နဲ​နဲ​လေး​ခက်​တာ​ကော​ကြောင့် ​တ​ကယ်​တမ်း ​ရှင်း​ပြ​ရ​မယ်​ဆို​ရင် ​အ​တော်​လေး​ကို ​လုပ်​ပြ​ရ​မှာ​ပါ . ​တစ်​ခု​လုပ်​ပြ​ဖို့​အ​တွက် ​အ​နည်း​ဆုံး ​ပုံ​တွေ​အ​တော်​များ​များ ​သုံး​ရ​မှာ​ပါ . ​ရန်​ကုန်​မှာ flash ​အ​တွက် ​စာ​အုပ်​တွေ ​ထွက်​နေ​ပြီ​ကြား​တယ် . ​ညီ​လေး ​ဝယ်​ဖတ်​လိုက်​ပါ . flash ​က​တော့ ​နည်း​နည်း ​လက်​ဝင်​တယ်​လို့ ​ကြို​ပြီး​ပြော​ပါ​ရ​စေ . ​အ​ရင်​ဦး​ဆုံး animation ​အ​ကြောင်း​ကို ​လေ့​လာ​ဖို့​အ​တွက် photoshop ​နဲ့ ​စ​ပြီး​လေ့​လာ​စေ​ချင်​ပါ​တယ် .
​မေး - Lo:​ကျွန်​တော်​အိမ်​ကpc​ကိုwindow​အ​သစ်​တင်​လိုက်​တာ​အ​သံ​အ​ထွက်​တော့​ပါ​ဘူး။​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​အ​ကို။ ​နောက်​ပြီး​တော့Rar file software ​မ​ရှိ​တော့​ပါ​ဘူး။ ​အဲ့​ပါ​ကြောင့် Rar software ​လို​ချင်​ပါ​တယ်။ ​တင်​ပေး​ပါ​ဦး။
​ဖြေ - ​ကြည့်​ရ​တာ ​ငါ့​ညီ ​တင်​လိုက်​တဲ့ window ​က xp sp3 ​ဖြစ်​ဖို့​များ​ပါ​တယ် . window xp sp3 ​မှာ​က​တော့ audio ​အ​တွက် ​အ​တော်​လေး ​အ​ခက်​အ​ခဲ​ဖြစ်​ကြ​ပါ​တယ် . ​အစ်​ကို ​ဖြေ​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . audio ​အ​တွက်​ပါ . ​အဲ့​ဒါ​နဲ့​မှ ​မ​ရ​ရင်​တော့ ​ငါ့​ညီ​ရဲ့ motherboard ​အ​မျိုး​အ​စား​ကို ​မေးလ်​နဲ့​ပို့​ပြီး​တော့ ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ ​အစ်​ကို audio driver ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ့​မယ် . win rar ​ကို​တော့ ​အစ်​ကို ​ဒီ​မှာ ​လိုင်​စင် version ​ကို ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . win rar ​ကို ​ဘယ်​လို ​အ​သုံး​ပြု​ရ​မယ် ​ဆို​တာ​ကို​လဲ ​အဲ့​မှာ movie ​နဲ့ ​တစ်​ခါ​တည်း ​ရှင်း​ပြ​ထား​ပါ​တယ် .
​မေး - Wai: ​အ​ကို​ရေ ​အဲ​ဒီ​ဖိုင်​မှာ ​ဗိုင်း​ရပ်စ် ​ပါ​နေ​တယ်​လို့ norton ​က​ပြ​နေ​ပါ​တယ်. ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​ပြန်​စစ်​ပေး​ပါ​ဦး
​ဖြေ - ​ညီ​လေး wai ​ရေ ​အဲ့​လို program ​တွေ​လို keygen, patch, crack ​စ​တာ​တွေ​ကို antivirus program ​တွေ​က virus ​အ​နေ​နဲ့​ပဲ ​သိ​ကြ​တယ်​ဆို​တာ​ကို​လဲ ​အစ်​ကို ​ပို့စ်​တော်​တော်​များ​များ​မှာ ​ပြော​ပြ​ထား​ပါ​တယ် . ​အစ်​ကို​တို့​တင်​တဲ့ ​ဘယ် program ​တွေ​မှာ​မှ virus ​ကို ​တင်​မ​ပေး​ပါ​ဘူး . ​စိတ်​ချ​လက်​ချ Download ​လုပ်​ပြီး ​စမ်း​ကြည့်​နိုင်​ပါ​တယ် . ​ညီ​လေး​ကို ​တစ်​ခု​အ​ကြံ​ပေး​ချင်​ပါ​တယ် . norton ​ကို ​သုံး​တာ​ထက်​စာ​ရင် kaspersky ​ကို ​သုံး​တာ​က ​ပို​ပြီး​တော့ ​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​ပါ​တယ် . norton ​ရဲ့ ​အား​သာ​ချက်​တစ်​ခု​က offline update ​တစ်​ခု​အ​တွက်​ပဲ ​အား​သာ​တာ​ပါ. ​တစ်​ကယ်​တမ်း ​သုံး​မယ်​ဆို​ရင် security ​ပိုင်း​ကို ​အ​ရမ်း​နေ​ရာ​ယူ​ထား​တာ ​များ​တော့ ​စက်​တစ်​လုံး​ကို ​စ​ဖွင့်​တာ​နဲ့ program ​သုံး​တဲ့​အ​ချိန်​တွေ​မှာ ​အ​ရမ်း​ကို ​နှေး​သွား​ပါ​တယ် . ​ဒါ​လေး​ကို norton ​သုံး​တဲ့​သူ​တိုင်း ​သ​တိ​ပြု​မိ​မှာ​ပါ . norton ​နဲ့ kaspersky ​ကို ​ယှဉ်​ပြီး​တော့ ​သုံး​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​ညီ​လေး​သိ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် . norton ​ကို​ဖြုတ်​ပြီး​လို့ kaspersky ​ကို ​ပြောင်း​တင်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ ​အ​ခက်​အ​ခဲ​ဖြစ်​နေ​တယ် ​တင်​လို့​မ​ရ​ဘူး. error ​ဖြစ်​နေ​သေး​တယ်​ဆို​ရင် ​ဖြစ်​နေ​တာ​ကို ​မေးလ်​ပို့​ပေး​ပါ. ​အစ်​ကို ​ဖြေ​ပေး​ထား​တာ ​တွေ​လဲ ​ရှိ​ပါ​တယ် . ​ဒီ​မှာ ​လိုက်​ဖတ်​လိုက်​ပါ . ​အဲ့​ဒါ ​အ​မေး​အ​ဖြေ​တွေ ​ချည်း​ပါ​ပဲ . ​လိုက်​ဖတ်​သင့်​တယ်​လို့ ​အ​ကြံ​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​ထဲ​မှာ ​အ​ခက်​အ​ခဲ​တစ်​ချို့​ကို ​ရေး​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​လို​အပ်​ရင် ​ပုံ​တွေ​နဲ့​ပါ ​တင်​ပေး​ထား ​ပါ​တယ်.
​မေး - saiheart ​ကျွန်​တော် window ​ပြောင်း​တင်​ချင်​လို. ​အဲ.​ဒါ​ဘယ်​လို ​လုပ်​ရ​မှာ​လဲ​အ​ကို
​ဖြေ - ​ညီ​လေး​ရေ window ​တင်​နည်း ​မြန်​မာ​လို ​ရေး​ထား​တဲ့ ​စာ​အုပ်​ကို ​ဒီ​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. Download ​လုပ်​ပြီး​တော့ ​ဖတ်​ပြီး window ​တင်​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​မိ​ပါ​တယ်.
Yee April 14, 2010 at 11:47 AM
3ds Max software ​လေး ​ဖြစ်​နိုင်​ရင်
​သ​ရဲ April 15, 2010 at 5:41 PM
​ဟုတ် ​အ​ကို ​ကျွန်​တော် ​အ​ခု ​ဖို​တို​ရှော့​ကို​စ​ပီ​လေ့​လာ​နေ​ပါ​တယ်​အ​ကို ​အ​တော်​စိတ်​ဝင်​စား​စ​ရာ​ကောင်း​သ​လို့ ​ခက်​လည်း​ခက်​တယ်​ဗျာ..
flash ​ကို​လည်း​သင်​ချင်​ပါ​တယ်​အ​ကို ​အ​ကို​အား​တဲ့​အ​ခါ
​ညီ​ဆီ​ကို ​မေး​က​နေ့ ​ပုံ​လေး​တွေ့​နှင့် ​ရှင်း​ပြ​ပီး​ပို့​ပေး​နိုင်​မ​လား ​ခင်​ဗျာ
​အ​ဟဲ ​ကျွန်​တော့်​မေးလ်​က ​အ​ကို ​မေးလ်​နာ​မည်​ကို​အ​တု​ခိုး​ထား​တာ
​ဖို​တို​ရှော့​နည်း​ပ​ညာ​လေး​တွေ ..​စာ​အုပ်​လေး​တွေ ​ပို့​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ ​ကျွန်​တော့​မေးလ်​ကို
​ရဲ​မာန် April 23, 2010 at 10:09 PM
​အ​ကို ​ကျွန်​တော် video editing ​လေ့​လာ​နေ​တာ​အ​ကို ​ဘယ်​ဟာ​က ​ပို​ကောင်း​လဲ​ပေါ့​နော် ​အ​ခု ​အ​ကို့​ထဲ​က​ပဲ ulead ​ကို​သုံး​နေ​တယ် background ​ကို​က​စား​ချင်​တာ ​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ် ​အဲ​ဒါ ​ကူ​ညီ​ပါ​လား ​ဘယ်​လို​လေ့​လာ​ရ​မ​လဲ ​ဘယ်​ဆော့​ဝဲရ်​က ​ပို​ကောင်း​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​ကူ​ညီ​ပေး​နော်။ ​အ​ကို့​ဆိုဒ်​ကို ​အ​မြဲ​တမ်း​အား​ပေး​နေ​ပါ​တယ်။ ​နှစ်​သစ်​မှာ ​အ​ကို​တော် ​ပျော်​ရွှင်​ပါ​စေ
sawkyibel April 30, 2010 at 12:08 AM
​အ​ကို​ရေ Opera ​မှာ ​မြန်​မာ​ဖောင့်​မ​ပေါ်​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ် ​အဲ​တာ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​အ​ကို
setting ​ထဲ​မှာ​လဲ ​အ​ကုန်​ပြောင်း​ပြီး​ပြီ​မ​ရ​ဘူး
man May 1, 2010 at 6:40 PM
​ကို ​နေ ​ရေ
​ကျွန်​တော် ​က ​ကိုယ်​ပိုင် ​ဘ​လော့ ​တ​ခု ​လုပ်​ကြည့် ​တယ်
​မူ​လ ​စာ​မျက်​နှာ ​မှာ ​အ​ကို ​တို့​လို့ ​ဇော်​ဂျီ ​ဖောင့်​ဘယ် ​လို​တင် ​ရ ​သ​လဲ
​နောက် ​ပြီး mp3 ​ပ​လေ​ယာ ​ဘယ် ​လို ​တင် ​ရ ​လဲ
​အ​ကို ​တို့ ​လို ​လုပ် ​ချင် ​တယ် ​ကူ​ညီ ​ဖြေ​ကြား ​ပေး​ပါ ​အ​ကို ​ညီ ​က​ဘာ​မှ ​မ​တတ် ​လို့ 
​စိတ် ​ဝင် ​စား​လို့​ကူ​ညီ​ပါ​ဘ​လော့ ​တည်​ဆောက် ​ပုံ ​ကို
​ရေး​တင်​ပေး​ပါ ​လား ​အ​ကို
vi November 26, 2010 at 3:33 PM
​ကို​ညီ​ရေ acer aspire 4520 window7driver ​လေး​တင်​ပေး​ပါ​အုံး